The Scardale Diet - Izay rehetra ilainao ho fantatra !! | Nutri Diet
Ny sakafo Scardale dia karazan-tsakafo mampihena izay mampiavaka ny fihenan-danja haingana be, noho ny fihinanana kaloria kely dia kely. Io no iray amin'ny sakafo tranainy indrindra hatramin'ny namoronana azy sy namboarin'ny Dokotera Herman Tarnower tamin'ny 1970 ary navoaka tamin'ny 1978. Na eo aza izany, na eo aza ny taona maro, dia mbola misy fanekena betsaka avy amin'ireo izay manapa-kevitra ny hihena ao anatin'ny fotoana fohy.
Ny sakafo Scardale dia mifototra amin'ny hevitra fampifangaroana proteinina, gliosida ary tavy, amin'ireto fizarana manaraka ireto amin'ny sakafo amin'ny andro iray: 43% proteinina, tavy 22,5% ary gliosida 34,5%. Nandritra ny taona maro 70 sy 80 Ity sakafo ity dia neken'ny ankamaroan'ny ankamaroany, noho ny loza mety hitranga aorian'izany sakafo proteinina tena avo lenta tsy fantatra mihitsy izy ireo.
Hatramin'izao dia tsy tokony hatao ny manaraka sakafo be proteinina, noho ny fahasimbana mety mijaly ny voa ary ny mety hisian'ny aretina taolana mahazatra toy ny osteoporosis. Na dia amin'ny taona 70 aza, noho ny fahasimbana maharitra, dia nanoro hevitra ny tsy hanaraka azy ireo ny mpitsabo roa herinandro mahery.
Raha ny fototry ny sakafon'ity sakafo ity dia mety ho resy ilay olona manapa-kevitra hanao izany 400 grama eo ho eo isan'andro. Tsy misy afa-tsy sakafo 3 isan'andro, manala ny sakafo antoandro sy tsakitsaky. Ny fototry ny sakafo dia misy voankazo, legioma ary hena mahia. Maha-sakafo tena be proteinina, afa-po tanteraka ilay olona ary mahalana no sisa noana. Ny olana lehibe amin'ity sakafo ity ary toy ny mahazatra amin'ny ankamaroan'ny antsoina hoe sakafo fahagagana dia mametra ny sakafo maro izay ilaina amin'ny fampandrosoana marina ny vatana.
Ny mampiavaka ny sakafo Scardale dia ny manoro hevitra ny fisotroana farafaharatsiny rano eo amin'ny 4 vera isan'andro Na dia tsy misy fetra ary ny zavatra atolotra dia 8 vera na rano roa litatra. Tena mahasoa ny vatana ny fihinanana tsiranoka satria manampy manala poizina ary ny fahaverezan'ny tavy mihangona.
1 Sakafo karazan-tsakafo scardale
2 Sakafo voarara sy avela amin'ny sakafo Scardale
3 Tombony azo amin'ny sakafo Scardale
4 Fihemorana amin'ny sakafo scardale
5 Lahatsary momba ny sakafo Scardale
Sakafo karazan-tsakafo scardale
Avy eo hasehoko anao ny ho toy izany menio mahazatra mahazatra isan'andro amin'ny sakafo Scardale. Araka ny efa nolazaiko teo aloha ao amin'ity karazana sakafo ity dia misy ihany Sakafo 3 isan'andro: Sakafo maraina, atoandro ary sakafo hariva.
Ny sakafo maraina dia mety ahitana antsasaky ny grapefruit na voankazo indraindray, sombin-mofo feno tritika tsy misy ary kafe na dite tsy misy siramamy.
Amin'ny sakafo azonao raisina akoho natsatsika miaraka amin'ny salady mitafy menaka oliva iray sotro. Afaka manana voankazo iray ianao In-4 isan-kerinandro.
Raha ny sakafo hariva dia afaka misafidy trondro tsy be tavy ianao, ny sasany legioma voatono na mahandro ary araho izy ireo miaraka amin'ny menaka oliva iray sotro.
Sakafo voarara sy avela amin'ny sakafo Scardale
Mba hazava kokoa aminao hoe inona ny sakafo scardale dia tanisaiko etsy ambany hoe iza izy ireo sakafo voarara na hoe tsy azonao raisina na amin'inona na amin'inona ary ireo izay azonao hohanina nefa tsy misy olana ary avela.
Ny sakafo izay voarara amin'ny sakafo Scardale dia ireo izay avy votoatin'ny voninkazo avo toy ny ovy, sakafo misy tavy fanampiny toy ny dibera na crème, ankamaroan'ny vokatra vita amin'ny ronono, ranom-boankazo, alikaola, zava-mamy na vokatra delicatessen.
Raha ny amin'ny sakafo avela Ary azonao ampidirina amin'ny sakafo tsy misy olana, misy legioma toy ny karaoty, kôkômbra, voatabia, epinara na broccoli. Afaka mampiasa ianao mamy fa tsy siramamy sy vinaingitra na zava-manitra dia azo ampidirina ao anaty akanjo. Momba ny fihinanana proteinina dia afaka manana hena na trondro ianao fa tsy maintsy izany tsy misy tavy.
Tombony azo amin'ny sakafo Scardale
Sakafo fahagagana matetika no ananan'izy ireo Zavatra tsara sy ratsy ary ny olona miaro azy ireo sy ny hafa mitsikera azy ireo, dia toy izany koa no hitranga amin'ny sakafo scardale. Mba hampahalalana anao tanteraka alohan'ny hanombohana ny sakafo Scardale, etsy ambany aho dia hiresaka momba ny andian-tombony na tombontsoa azo avy amin'ny fanarahana an'ity karazana sakafo ity
Sakafo ho azonao izany vokatra tsara ao anatin'ny fotoana fohy. Raha mila mamoy lanja haingana ianao dia sakafo lavorary araho.
Amin'ny alàlan'ny sakafo vita amin'ny andiana sakafo manokana, Tsy mila adala ianao manisa ny kaloria isaky ny vokatra na mahita hoe ohatrinona ny lanja laninao tsirairay avy.
Tsy mila ampiana fanampiny izany karazana fanatanjahan-tena na fampihetseham-batanaRaha manaraka ny torolàlana napetraky ny sakafo ianao dia ho very ny kilao napetrakao.
Fihemorana amin'ny sakafo scardale
Toy ny mahazatra amin'ny karazan-tsakafo ity, ny sakafo hanarahanao azy tsy voalanjalanja mihintsy ary ny vatana dia tsy mahazo ny otrikaina rehetra ilainy hiasa tanteraka.
sakafo maraina tsy manome otrikaina na angovo ampy hanombohana ny andro izany.
Tsy misy afa-tsy sakafo 3 isan'andro, dia mety hahatsapa tsy fahampiana herinaratra, fahalemena na manana hanoanana.
Raha ny filazan'ny manam-pahaizana momba ny sakafo sasany dia tsy tokony ho elaela io sakafo io satria mety hiteraka olana ara-pahasalamana lehibe toa ny nitombo asidra urika na tsy fahampian-drano. Ho fanampin'izany, ny voa dia mety ho simbaina na iharan-doza.
Na dia mahasalama ny vatana aza ny fampihetseham-batana dia tsy soso-kevitra izany, noho ny tsy fahampian-tsakafo ary ho an'ireo kaloria kely lany mandritra ny tontolo andro.
Raha manapa-kevitra ny hanomboka ny sakafo Scardale ianao dia zava-dehibe fa teo aloha manatona ny dokoteranao hanoro anao raha mety hampidi-doza ny fahasalamanao izany.
Lahatsary momba ny sakafo Scardale
Avy eo avelako ianao horonantsary manazava momba ny sakafo Scardale mba hahafahanao mianatra bebe kokoa momba izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » Vatsim-pivelomana » Ny sakafo Scardale
Vitamina ho an'ny volo